Momba anay - Hebei Yifan Wood Industry Co., Ltd.
Indostrian'ny Hazo Hebei Yifan
Any Quyangqiao, Zhengding County no misy azy, 6 400 metatra toradroa ny velarany. Alohan'ny hanombohantsika ny orinasa iraisam-pirenena dia zava-bita lehibe no vita teo amin'ny sehatry ny varotra any Sina.
Ny orinasa dia manana fitaovana famokarana fanapahana, tsofa fanodinana elektronika, fandavahana mandeha ho azy enina mandeha ho azy, milina fanaovana pirinty mandeha ho azy avy any Alemana sy fitaovana lehibe hafa. Manaraka ny politikam-pirenena miaro ny tontolo iainana izahay ary manana fomba fivoahan'ny maloto. Tamin'ny volana aogositra 2019, dia nitarina ny faritry ny orinasa, ary tonga lafatra indray ireo fitaovana.
Ny tantaran'ny orinasa dia azo zahana hatramin'ny 1985. Ny mpanorina dia nanaraka akaiky ny fisondrotan'ny fampandrosoana nasionaly ary nanangana orinasa iray miaraka amin'ny famokarana sy ny varotra. Nanjary orinasam-pamokarana lehibe any Sina izy io.
Manomboka manitatra ny ekipa amoron-dranomasina isika amin'ny 2016, ary manana ekipa mpamokatra sy varotra matotra ankehitriny.
Ny entanay dia amidy eran'izao tontolo izao (Etazonia, UK, Repoblika Tseky, Polonina, Israel ...) Ao amin'ny fivarotanay dia azonao atao ny mizaha fomba isan-karazany, manomboka amin'ny maoderina ka hatrany amin'ny rustika ary izay rehetra eo anelanelany. Ny vidin'entana manerana ny fivarotanay dia tsy misy vidiny, koa azonao antoka fa hahita zavatra ambany kokoa ianao.
Ny tanjonay dia ny hampahatsiaro ny mpanjifanay ho toy ny superstars misy azy ireo. Hatramin'ny vokatra noforoninay ka hatramin'ny serivisy ho an'ny mpanjifantsika dia manome antoka izahay fa izay rehetra vokarinay dia kalitao avo lenta ary ny olona rehetra dia karakaraina am-pitiavana sy am-pitandremana. Miezaka izahay mba hanome ohatra ny famelana ny hatsaranao hamiratra sy hamiratra avy ao anatiny.
Fantatray fa indraindray tsy manana izay tadiavinao aseho izahay, fa raha manome anao fotoana hanehoana katalaogy isan-karazany avy amin'ny mpamatsy anay izahay dia mety hahita ilay fanaka tena lavorary tadiavinao. Azafady mba minoa fa afaka manome anao ny traikefa fiantsenana tsara indrindra izahay.
Tongasoa eto amin'ny Fanadihadiana!